Xog: Akhriso Sababta uu isku Casilay C/raxmaan Caynte-Safiirkii Somalia ee UK. – Hornafrik Media Network
Xog: Akhriso Sababta uu isku Casilay C/raxmaan Caynte-Safiirkii Somalia ee UK.
By HornAfrik	 Last updated Oct 24, 2017
Mudane Cabdiraxmaan Yuusuf Cali Caynte, Safiirkii Soomaaliya ee UK ayaa iska casilay Xilkii Safiirnimo.
Mr. Caynte waxaa xilkan u magacaabay madaxweyne Maxamed Cabdullahi Farmaajo bishii June ee sanadkan.
Cabdiraxmaan Yuusuf Cali Caynte ayaa loo magaacabay safiirka Soomaaliya ee UK. Caynte waxa uu ahaa wasiirkii hore ee Qorsheynta iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee dawladii uu madaxweynaha ka ahaa mudane Xasan SheekhMaxamuud, waxaana lagu tiriyaa in uu yahay saaxiib aad ugu dhow Madaxweyne Farmaajo.
Abuukar Daahir Cusmaan (Baalle) ayaa isagana loo magacaabay wakiilka Qaramada Midoobay (UN) u joogi doona Soomaaliya. Abuukar ayaa 3 biloodoo keliya ahaa Agaasimaha Madaxtooyada, isagoo sidoo kale ahaa Agaasimaha Xafiiska Ra’iisal Wasaaraha xilligii uu Farmaajo ahaa Ra’iisal Wasaaraha dawladii Madaxweyne Shariif SheekhAxmed. Waxaa isagana lagu tiriyaa saaaxiibada ugu dhow Madaxweyne Farmaajo.
Sababta uu isku Casilay Caynte.
Madaxtooyadda iyo Xafiiska Raiisulwasaaraha ayaa laga soo xigtay in sababaha is casilaada Ceynte ay salka ku heyso in aan laga soo aqbalin magacaabidiisa, waxaana hadii la aqbali lahaa waraaqaha aqoonsiga ka guddoomi laheyd Boqorada UK.
Sidoo kale Mr Ceynte ayaa la sheegay in markii horeba uusan ku qanacsaneyn xilka Safiirka UK, waxaana uu raadinayay Safiirka Soomaaliya ee Kenya, balse ma aanu ku guuleysan.
Waxaa kaloo magacaabidiisa UK loo arkayay mid lagu fogeynayay, maadaama uu ka mid ahaa shaqsiyaadka saameynta ku leh arrimaha siyaasada gudaha, kana mid ah Xisbiyada siyaasada ee dalka.
Mudane Cabdiraxmaan Yuusuf Cali Caynte oo u sheegay Warbaahinta inuu ku biiray xafiiska Qaramada Midoobey ee bariga Dhexe ayaa ku macneeyay sababaha uu isku casilay Arrimo la xiriira Qarash La’aan iyo Dowladda oo ku guuldaraysatay Dhismaha Safaaradda. Wuxuuna sheegay in tan iyo markii loo magacaabay Safaaradda aysan jirin Miisaaniyad la siiyay si ay u qabtaan Howlaha looga baahan yahay Safaaradda.
Madaxweynaha Soomaaliya Oo Goordhow Gaaray Dalka Jabuuti